‘धुर्मुस-सुन्तली’ अब नेपाली चलचित्रमा एक साथ् !!::Nepal's Digital Paper
‘धुर्मुस-सुन्तली’ अब नेपाली चलचित्रमा एक साथ् !!
चार ठाउँमा नमुना बस्ती निर्माण गरिसकेका ‘रियल कपल’ हाल भरतपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रंगशाला निर्माणमा जुटेका छन् ।
एक समय टेलिभिजनको दुनियाँमा बलियो साम्राज्य बनाएको जोडी हो- सिताराम कट्टेल र कुञ्जना घिमिरे । हास्य टेलिसिरियल ‘मेरी बाँस्सै’ मा लामो समय दुईले ‘धुर्मुस-सुन्तली’ को भूमिकामार्फत् दर्शक रिझाए । वि.सं २०७२ को महाभूकम्पपछि अभिनयबाट दूरी बनाएर उनीहरु समाजसेवामा लागे ।
समाजसेवामा होमिएपछि सिताराम र कुञ्जना न टेलिभिजनको पर्दामा देखिएका छन् न त फिल्ममा नै । सामाजिक कार्यसँगै अभिनयलाई पनि निरन्तरता दिन दर्शक र चलचित्रकर्मीहरुको आग्रहपश्चात् दुई केही समययता फिल्म निर्माणको तयारीमा छन् । स्क्रिप्ट लेखनको सुरुवाती चरणमा फिल्मको नाम ‘एन्टीभाइरस’ राखिएको थियो । पछि ज्योतिषीले ‘एस’ बाट नाम जुराउन सल्लाह दिएपछि फिल्मको नाम ‘सेन्टीभाइरस’ बनाइएको जानकारी प्राप्त छ ।
गत वर्ष सिताराम आफ्नो जन्मदिनमा फिल्मको औपचारिक निर्माण घोषणा गर्ने तयारीमा थिए । तर, निर्देशक र कलाकार फाइनल नभएका कारण थाती राखे । यसपछि सिताराम र कुञ्जना क्रिकेट रंगशाला निर्माणमा लागे र फिल्म निर्माण थन्कियो । अब भने दुईले फिल्म निर्माणलाई अगाडि बढाएका छन् । यसअघि कुञ्जना स्वयंले निर्देशन गर्ने चर्चा भएको फिल्ममा ‘कबड्डी’ सिरिजका निर्देशक रामबाबु गुरुङको प्रवेश भएको छ ।
केही दिन अगाडि ‘धुर्मुस-सुन्तली’ ले निर्देशकको रुपमा फिल्ममा रामबाबुलाई अनुबन्ध गरेको गोप्य स्रोतले फिल्मीखबरलाई जानकारी दिएको छ । यस विषयमा निर्माण टिमले भने कुनै जानकारी दिएको छैन । रामबाबुले आफ्नो पाइपलाइनमा रहेको फिल्म भ्याएपछि यो फिल्म गर्ने सम्झौता भएको स्रोत बताउँछ । फिल्ममा ‘धुर्मुस-सुन्तली’ को प्रमुख भूमिका रहनेछ । लिड रोलमा अभिनेता प्रदीप खड्कालाई अफर गरिएको छ । तर, उनले गर्ने/नगर्ने तय भएको छैन ।
ए डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत आज सातौँ चरणका अन्तिम दुई खेल हुँदै
उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले बोलाइन् पत्रकार , शिवमायाको राजीनामापछि को होला उपसभामुख ?
सुनको भाउ फेरि बढ्यो , हेर्नुहोस् तोलाको कति पुग्यो त ?
काठमाण्डाै – कतार एअरवेज शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलअन्तर्गत साेमबार...
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्ने...
सुन आज तोलाको ७५ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। केही दिनदेखि...